Sidee looga saaraa marinka koontadaada Google taleefankaagii hore ee Android | Androidsis
Sida looga saaro marinka koontadaada Google taleefankaagii hore ee Android
Eder Ferreño | | Amniga, Khiyaamada Android
Markaad bedesho taleefanka Android, Waxaa jira dhowr waxyaalood oo ay tahay inaan sameyno. Dhinac, way fiicantahay in taleefanka laga saaro google play, si aynaan ugu rakibin isla barnaamijyada aan rabno inaan ku rakibno taleefankeenna cusub. Intaas waxaa sii dheer, waxaan ka saari karnaa marinka koontada Google taleefankan. Qiyaas aad faa'iido u yeelan karta, sababo ay ka mid yihiin amniga.
Sidan oo kale, haddii aan horay u joojinnay adeegsiga taleefankan duugga ah ee Android, waxaan kaa qaadi karnaa marinkaaga koontadaada Google. Waa tallaabo rasmi ah, oo cadeyneysa in aanaan adeegsan doonin taleefankan kana hor istaageyno koontada su'aasha laga qabo in la galo isticmaalkeeda.
Aad bay u fududahay in laga saaro marinkaas. Waxa ugu fiican ayaa ah inaan ka qaban karno kombuyuutarka, goobaha kootada Google. Waa inaan galnaa link this, halka aan ka helno qaybta amniga koontada. Qeybtaan, haddii aan xoogaa rogno, waxaa jira qeybta aaladayda.
Waxaan galnaa qaybtaan, adigoo gujinaya qalabka lagu maareeyo halkaana waxaan ku arki doonaa telefoonada Android ama kiniiniyada ee marin u heli kara koontada la sheegay. Marka xigta, waa inaan kaliya dhagsii taleefankaas oo aanan dooneynin inaan mar hore marin u helno iyada, taleefankii hore ee kiiskan. Kadib dhowr ikhtiyaar ayaa soo muuqan doona.
Casaanka waxaan ku aragnaa inay jiraan badhan oranaya ka noqo, oo aan riixeyno. Badhankani wuxuu u oggolaanayaa taleefanka inuusan mar dambe marin u lahayn koontada Google wakhti kasta. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad xaqiijiso inaan runti dooneyno inaan ka saarno taleefanka liiskan. Waxaan siineynaa inuu aqbalo howshana way dhamaatay.
Tani waa wax aan awoodi doonno inaan ku sameyno dhammaan taleefannada Android ama kiniinnada marin u leh koontada Google. Markaa haddii aad joojisay isticmaalkooda qaar ka mid ah, iyadoo tallaabooyinkan la qaadayo ay suurtagal noqonayso. Way fududahay waana hab fiican oo loo maro ka ilaali qof inuu xisaabtamo sidaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Amniga » Sida looga saaro marinka koontadaada Google taleefankaagii hore ee Android
Nuqulada FaceApp waxaa ku jiri kara furin
ZTE wuxuu rukhsad ka helayaa telefoon cusub oo laba shaashad leh